Isidakamizwa esithi "Spaskuprel" imiyalelo yokusetshenziswa ichaza njengemithi yokwelapha ekhaya, ene-analgesic, i-antispasmodic ne-anticonvulsant effect. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unomphumela wokwehlisa umzimba.
Incazelo yesenzo semithi yesidakamizwa
Ukulungiswa kwe- Spasmolitic "Spaskuprel", intengo yayo eyi-ruble engama-200, ibhekisela eqenjini lezokwelapha ezidakamizwa ezisetshenziselwa izimpawu zobuhlungu ezitholakala ezithombeni ezingenalutho nemisipha - izinso, isisu, isisu, i-bronchi ne-gallbladder. Kulokhu, isenzo se-analgesic agent ngokuqondile ngenxa yezingxenye ezisebenzayo ezikhona ezakhiweni zayo. Kuyinto inhlanganisela yazo zonke lezi zakhi ezenza kube lula ukukhipha ngokuphumelelayo isikhala se-musculature esicwebile futhi eshelelekile, ukuzola futhi usebenzise umphumela we-analgesic.
Izici zendlela yokukhululwa nokubunjwa
Bakhiqiza ikhambi lokuzakhela ekhaya "Spaskuprel" (imiyalelo yokusetshenziswa ihlale ihambisana nomkhiqizi kuphakheji ngayinye) ngendlela yamakhandlela, amaphilisi kanye nesisombululo sejova. Lezi zici zihlanganisa, njengezingxenye eziyinhloko, i-Citrillus Colocyntis D4, i-Ammonium Bromatum D4, i-Veratrum Albumum D6, i-Gelzemium Sempervirens D6, i-Atropinum Sulfuricum D6, i-Passiflora Incarnata D2, i-Magnesium Phosphoricum D6, i-Agaricus D4, i-Kuprum Sulfuricum D6 ne-Aconite Napellus D6. Izinto ezifanayo ziqukethwe kumathebulethi naku-suppositories. Ngaphezu kwalokho, isixazululo somjovo sihlanganisa ama-excipients anjengama-distilled amanzi ne-sodium chloride. Amathebulethi "i-Spaskuprel" akhiqizwa ngendlela yama-flatrage-cylindrical dragees ngaphandle kokuhogela, okwesibhakabhaka-omhlophe noma omhlophe ngokufakwa okuncane okumnyama noma okuluhlaza okwesibhakabhaka. Njengoba izakhi ezisekelwayo ezakhiweni zazo zihlanganisa i-lactose ne- magnesium stearate. Ngokuqondene nekhefu elivela kuma-pharmacy, khona-ke ngaphandle kwemithi efanele, ungathenga kuphela amathebulethi noma i-suppositories "Spaskuprel" (imiyalelo yokusetshenziswa iqinisekisa lokhu), futhi izixazululo zokugaya zidayiswa kuphela ngemithi evela odokotela abalapha.
Ukusebenzisa le nkampani yokulungiselela i-homeopathic-umkhiqizi uncoma ukuze kuqedwe isifo se-spastic syndrome esibangelwa yi-cholecystitis, isifo sofuba, i- dyskinesia ye-bile duct, isifo se-ulcerative esiswini, i- spastic colitis noma isilonda se-duodenum. Abesifazane abanesifo se-cystitis, nabo baboniswa ukusetshenziswa kwe-analgesic "Spaskuprel." Ukubuyekezwa nakho kufakazela imiphumela emihle yokusetshenziswa kwayo ku-urolithic noma i-cholelithiasis. Uma kwenzeka isifo sofuba esisimangele, lesi sidakamizwa se-antispasmodic nesi-anticonvulsant sivame ukubekwa ochwepheshe. Phakathi kwezinye izinto, ukuthatha imiyalelo ye-"Sparkuprel" yokusetshenziswa isebenzise abesifazane ngesikhathi se-PMS, kanye namantombazane amancane aphethwe yi-dysmenorrhea - inqubo yokulandelana kwemvelo, ephelezelwa ubuhlungu obukhulu esiswini ngesikhathi sokuya esikhathini. Okokugcina, ukusetshenziswa kwalolu lungiselelo lwe-homeopathic analgesic kunconywa ukuthi kususwe iziphazamisi zesisu (esihlanganisa ukungezwani kwemisipha nokuqina komzimba).
Uhlu lwama-contraindications amakhulu
Amaphilisi e-homeopathic "i-Spaskuprel" yenkampani yenkampani ayihlosisi abantu abahlukunyezwa yi-hypersensitivity kunoma yiziphi izithako ezisebenzayo ezitholakala ekubunjweni kwazo, kanye nangendlela yokwehliswa kwe-lactose ne-magnesium stearate. Ngaphezu kwalokho, ungathathi le-analgesic kubantu abanesifo se-lactose noma uhlobo lokungahloniphi i-galactose. Iziguli ezingaphansi kweminyaka engama-3 aziphathwa ngezidakamizwa ze-analgesic "Spaskuprel". Ukubuyekezwa nakho kubonisa ukungafaniseki kokusetshenziswa kwayo ngesikhathi sokubeletha noma ngenkathi kudliwa ingane esanda kuzalwa enebele. Kulezi zimo ezimbili, umuthi ungathathwa kuphela udokotela. Ngokuqondene nesisombululo se-injection, yona, ngaphezu kwezimo ezingenhla, ayivunyelwe ukuqoka izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12. Ama-Suppository awavunyelwe ukusebenzisa abantu ngokuzwela okwedlulele ezingxenyeni ezisendleleni zabo.
Ukusabela okunzima okungenzeka
Uhlu lwemiphumela emibi kakhulu ehlotshaniswa nokusetshenziselwa ukwelashwa kwe-homeopathic "Spaskuprel", ngokuyisisekelo kuhlanganisa zonke izinhlobo zokuzizwa kwemizwa. Isibonelo, kwezinye iziguli, ubomvu, isikhumba noma ukuvuvukala kungabonwa. Ngaphezu kwalokho, kunengozi yokushisa noma imifantu.
Isidakamizwa "I-Cycloferon" ku-ampoules
Yini engcono - "i-Prednisolone" noma "i-Metizred"? Uyini umehluko?
Lichtenberg mkhuba: izibalo emzimbeni
Ukwelashwa nokuvikelwa periodontitis okungamahlalakhona: Izindlela